Izibalo zeBusiness Analyst for Beginners & Professional | ITS
Isiqinisekiso seBusiness Analysts
I-Project Planning and Management Course
Izidingo zebhizinisi zokuthuthukisa nokuhlangana
I-Course Assessment Course
Izindlela Ekhethiwe Zokuba I-Analyst Business
I-1. I-Developer Developer
I-2. Thola isitifiketi sokuhlaziywa kwebhizinisi
I-3. I-Specialization Industry
Lapho ungathola khona i-Business Analyst Course
Abahlaziyi bebhizinisi baqaphela izinkinga, baqede isidingo, babhekane neqembu leprojekthi, futhi bajwayele izinguquko ngokuqhuba ibhizinisi. Zenza ngcono futhi zixazulule izinqubo zebhizinisi, isibonelo, isivuno, ukusabalalisa inzuzo nabanye. Izixazululo abanikezayo zisekelwe emisha. Intshisekelo yabahlaziyizimboni isenyuka kuzo zonke izigaba.
Iziqu zidinga amakhono ongayifunda esikoleni sokuhlaziya ibhizinisi. Inkambo yezobuchwepheshe kanye nezobuchwepheshe emasimini ahlangene nebhizinisi akubeka ngokufanelekile ekuboniseni umsebenzi. Noma kunjalo, izinhlelo zesitifiketi zinikeza ukuqeqeshwa okubaluleke kakhulu. Inkambo iyala izici ezicashile zenqubo yokuhlaziya futhi inikeza iziqondiso zokufunda eziwusizo.
Inkambo ibalulekile kubachwepheshe kanye nochwepheshe abadinga ukuhlala babalulekile emsebenzini wokukhangisa futhi ngaphezu kwalokho labo abaqondile esikoleni.
Inkambo ye-analyst yebhizinisi yilabo abathandekayo ngokusiza amakhasimende ukuba ahlangane imigomo yebhizinisi. AmaKholeji namayunivesithi anikeza izifundo emahhovisi, isibonelo, ukuthuthukiswa kahle nokuqhubeka nokuqeqeshwa. Ithimu lesitifiketi sesitifiketi esifanele asifinyelele kulokho unyaka owodwa futhi kudinga ukuba ucabangisise nge-4 kwizifundo ze-10 kanye nama-electives.
Ukufunda imibono ebangeni lokuhlaziywa kwebhizinisi kufaka:
Izingxenye zomhlaziyi webhizinisi
Ukuqonda izidingo zomhlangano
Ucwaningo oluyinhloko mayelana nokuhlaziywa kwebhizinisi
Ukuhlola nokwengamela izinkinga ezivezwe ibhizinisi
Inkambo Yokuhlaziywa Kwebhizinisi
Inkambo yokuhlaziywa kwebhizinisi ikwazisa ngawe izingxenye ze abahlaziyi nokuzibophezela kwabo enhlanganweni. Kuyinto ukubuyekezwa kokubiza okuhlukanisa umsebenzi a umhlaziyi webhizinisi. Ezinye zezinyathelo zakho zisebenzisa amasu ayisisekelo nezinhlelo zokunakekela izindaba zebhizinisi, ukuhlola ukufezwa kwesisombululo, nokuhlola kuvela.
In ukuhlela iphrojekthi nokuphathwa, uthatha izinhlelo nezinhlelo eziyisisekelo zokubhekana neprojekthi ngokufanele. Wena ngokwengeziwe uyazihlanganisa nokuphenya kwangaphakathi. Amaphuzu kule nkambo yilezi:
Ukubhekana nazo zonke izifiso
Kudingeka futhi kwenziwe iphrojekthi
Isidingo sokuqoqa inkambo
Inkambo ibonisa izinqubo zokuqondisa ukubuyekezwa, imihlangano, ukuqoqa kanye nokurekhoda izidingo, isibonelo, imibuthano ephakathi, ukucabangela, nabanye. Ukwandisa ukubandakanya isandla okusheshayo ngokwenza izidingo zebhizinisi ingobo yomlando.
Ekugcineni, uthola ukuthi uhlaziye kanjani ukuhlaziya. Lokhu kuqhubeka kuhlanganisa ukuhlola nokuvuma izixazululo zokuqinisekisa ikhwalithi kanye nemiphumela ephumelelayo. Izixazululo kufanele zihlangabezane nezidingo zabaklayenti kanye nemiphumela efunayo. Uzosebenza ekwenzeni izivivinyo ukuqinisekisa izixazululo ezihlongozwayo.
Izindlela eziningi zingakufika kumsebenzi wokuhlaziya ibhizinisi. Izingqinamba zakho zingcono uma i-IT yakho nezindlela zebhizinisi ziphezulu. Ukuqonda okungaqondakali komakethe ngaphezu kwalokho kukubeka phambili. Ngaphandle kokufunda ungakwazi lezi zindlela zingakusiza ukuba uhlaziye ibhizinisi:
Abathuthukisi be-Software banolwazi lokumba izimayini nokuhlaziywa, namakhono okuxhumana. Ukucubungula ukuhlaziywa kwebhizinisi nokujoyina ulwazi lokuthuthukiswa kwesofthiwe kusiza ukuthi ukhokhe imali engenayo emkhakheni wokuhlaziya ibhizinisi.
Faka isicelo sesitifiketi sesitifiketi sokuhlaziywa kwebhizinisi ngesikhathi sokuthi ubambe isitifiketi seminyaka emine ezindaweni, isibonelo, uhlaka lwe-HR, uhlaka lwamabhuku, ukugcinwa kwamabhuku kanye nebhizinisi. Uzothatha amakhono abalulekile ukuze uthathe umsebenzi njengomhlaziyi webhizinisi.
Amakholeji amaningi anikeza inkambo ye-4 yonyaka wezinhlelo zokuhlaziya zebhizinisi eziphansi futhi eziphothule. Ezinye izinhlangano ze-IT zinikezela ngezifundo ezifanayo. I-Innovative Technology Solutions iyisimo esikhethekile ngoba sinezifundo zakamuva ze-Oracle Certification ezithuthumayo zomhlaziyi omusha nolwazi.
Amabhizinisi amaningi axhuma nabahlaziyi ukuze bazisize bavumelane nesimo sokushintsha. Okwamanje, ukuhlaziywa kwebhizinisi uyisiqeshana izifundo zebhizinisi ekolishi kanye nezinye izizinda zokuqeqesha emhlabeni wonke. Ungathatha inkambo evela ku-ITS futhi.
I-PMP Certification Career Opportunities